Ambohimanarina : Tale maorisianina iray maty tamina hotely
Omaly antoandro no hita maty irery tao amin’ny efitra nisy azy, tamina hotely iray eto an-drenivohitra, ny teratany maorisianina iray.
Tsy fantatra izay tena nahazo ity vahiny ity fa ny maraina izy no voalaza fa nandoa eran’ny trano ary nanafatra zava-pisotro tamin’ireo mpiasa tao amin’ilay hotely.
« Tokony ho tamin’ny 10 ora antoandro no tsikaritry ny mpiasa tao amin’ilay trano fandraisam-bahiny ny vatana mangatsiakan’ilay Maorisianina.
Nampandre avy hatrany ny tompon’andraikitra izy ireo. Tonga teny an-toerana ny Birao monisipaly misahana nyy fahadiovana (BMH) nijery ilay razana sy ny polisy misahana ny heloka bevava », hoy ny loharanom-baovao.
Tsy nahazoana fanampim-baovao mikasika ity tranga ity ireo tompon’andraikitra tao amain’ilay trano fandraisam-bahiny.
« Tsy misy olon-dehibe afaka hiresaka ato aminay izao. Efa lasa any amin’ny tranompatin’ny Hjra ny razana », hoy fotsiny ihany ny mpiasa iray tao raha nanontaniana.
Raha ny fantatra dia tamin’ny 15 mey no tonga teto Madagasikara ilay maty. Fivahinianana araka asa no nisoratra tao amin’ny pasipaoriny. 60 taona ny lehilahy ary tale no andraikiny.
« Ahiana ho vokatry ny tsy fahasalamana no nahafaty ity teratany maorisianiny ity. Voalaza ho marary vavony mantsy ny tenany nefa ahiana ho nisotro zava-pisotro misy alikaola ihany koa », hoy ireo tompon’andraikitra tonga teny an-toerana nijery ny razana.
Miandry ny valin’ny fitiliana hotanterahina anio vao ho fantatra izay tena antony marina nahafaty azy.